ပုံနှိပ်ဆားကစ်, printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, Eight layer board, rigid 8 layer printed board. 8 layer, IT180, HASL LF - တရုတ် circuitပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး��ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့��ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်prPCBed ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့iPWBoarတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့riရှစ်အလွှာဘုတ်အဖွဲ့gidတောင့်တင်းသောtedအလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့ boaအလွှာriIT180 layer printed board. 8 layer, IT180, HASL LF ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, * 185MM တစ်ခုတည်းအရွယ်အစား 145, ပြားအဖြစ်သင်္ဘော, 1.6မီလီမီတာ - 1 အောင်စ - 8 အလွှာ - FR4 170Tg, အစိမ်းရောင်ဂဟေဆက် gloss x ကိုတှနျးလှနျ 2, အဖြူရောင် Silkscreen က x 2, HASL LF. ul မှတ်သားခြင်းနှင့်အတည်ပြု, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 8, IPC CLASS 2, အားလုံး soldermask ဆည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရပါမည်.
4အလွှာ 1.6mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ 2U VIAS ဗဓေလသစ်ဖြည့်ဗဓေလသစ်မှတစ်ဆင့်ပလပ်
1 PCB လူမီနီယမ် PCB သတ္တု PCB HASL အဖြူရောင်မျက်နှာဖုံး Layer